Ny androaniko | 2
[Tantara fampahalalana. ] 11 Mey, 2021 17:40
San Pietro in Vincoli no anarana nomena io bazilika io noho ireo rojo vy namatorana an'i Masindahy Piera voatahiry ao : avy amin'ny teny latina hoe "vincula" = rojo vý.
Araka ny lovantsofina, dia nampiasaina namatorana an'i Masindahy Piera nandritra ny fotoana nigadrany tany Jerosalema sy tao amin'ny fonjan'i Mamertino ao Roma ireo rojo ireo.
Tamin'ny taonjato faha-5 talohan'i Jesoa Kristy manko dia nomen'i Juvenal, Patriarkan'i Jerosalema, ho fanomezana ho an'i Elia Eudocia, vadin'ny amperora Theodosius II ny rojo vy izay nitazonana an'i Masindahy Piera tany am-ponja tany amin'ny taniny, araka ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly.
I Licinia Eudossia indray, izay zanakavavin'i Elia Eudocia sy Theodosius II, ary vadin'ny amperora Valentinian III, no nanome io rojo vý io ho an'ny Papa Leon I.
Ny Eglizy anefa moa dia efa nanana ny rojo vý namatorana an'i Md Piera ao amin'ny fonjan'i Mamertino tao Roma, hany ka rehefa nampifanatonin'ny Papa Léon I ireo rojo vý roa ireo dia nahavariana fa avy nitambatra lasa iray. ​
[Tantara fampahalalana. ] 09 Aprily, 2021 23:07
Ny 'Ruota degli Esposti', ilay kodiarana fametrahana ireo zaza tsy niriana.
Ny "Ruota degli Esposti" amin'ny teny italianina, na "baby hatch" amin'ny teny anglisy, na "Tour d'abandon" amin'ny teny frantsay, na "Babyklappe" amin'ny teny alemanina dia karazana boaty mihodina eo amin'ny rindrin'ny hopitaly, fahizany, nahafahan'ny reny nametraka zaza nefa tsy tazana avy ao anatiny. Matetika teo akaikin'ilay kodiarana dia nisy lakolosy, hampandrenesana ireo tompon'andraikitra ka rehefa tafahodina any amin-drizareo ilay boaty dia sokafany mba ahafahana manome ny vonjy aina voalohany ho an’ilay zaza vao teraka.
Ny "Ruota degli Esposti" – na hoe “Kodiarana ho an’ireo Aseho” raha adika tsotsotra – ao amin'ny hopitaly Santo Spirito in Sassia eto Roma dia napetraka tamin'ny taona 1198, araka ny fanirian’i Papa Innocent III, mba ahafahan'ny vehivavy mamela ny zaza tsy vitany hotezaina fa tsy hamonoany azy. Be loatra manko tamin’izany ireo zaza narian-dreniny tao amin’ny onin’i Tibra.
Eo amin’ny rindrina, akaikin'ilay "kodiarana" dia misy lavaka ihany koa, karazana boaty fanitrihana taratasy ahafahan’ny olona mametraka vola kely fanampiana anohanana ny mpikararaka ireo zaza. Ireo zaza raisina ao dia nasiana marika lakroa kely amin'ny tongony havia ary "aseho" amin'ny kodiarana indray izy ireo sao mba misy hanangana azy.
Misy ireo mametraka firavaka, na antontan-taratasy na famantarana hafa miavaka, miaraka amin’ilay zaza rehefa ampidirina anaty kodiarana mba ahafahana mamantatra azy any aoriana any, raha ilaina.
Efa tamin’ny taonjato maro lasa moa ity resahantsika ity fa atý amin’ny taona roa arivo dia misy ihany koa io “Kodiarana” io fa manaraka ny toetr'andro : tany Hamburg tamin'ny taona 2000, taorian'ny tranga maromaro izay nahitana zazakely maty noho ny fijotsoan’ny hafanana tamin'ny taona 1999.
Izy ity indray dia fandriana mafana ahafahana mametraka ny zazakely avy any ivelany. Mba anomezana fotoana ilay reny handeha tsisy mahita, dia afaka minitra vitsivitsy vao maneno ilay kiririna iva feo napetraka amin’ilay fandriana, mampandre moramora hoe misy zazakely tonga ka mila alaina sy karakaraina. Tsaboina mandritra ny valo herinandro ireo zaza amin’izay. Mandritra izany dia afaka miverina maka ny zanany tsy misy arakaraka ny reniny. Raha tsy mitranga anatin’izay izy dia afaka omena hatsangana ilay zaza. Tamin'ny 2005 dia nandray zaza 22 rizareo ka ny fito tamin'izy ireo dia nalain'ny reniny ihany.
[Tantara fampahalalana. ] 06 Aprily, 2021 21:27
Inona angaha no anatin'ilay bola mivolom-bolamena ambony satro-tranon'ny bazilikan'i Md Piera.
​Ho an'izay efa nitsidika ny bazilikan'i Md Piera eto Roma na ireo nahita sary fotsiny ihany koa dia mahalala fa eo ambonin'ny satro-trano namboarin'i Michelangelo dia misy bola mivolom-bolamena tataovina lakroa makadiry. Toa bitika erý mijery azy io raha avy eo amin'ny Kianjan'i Md Piera saingy tena goavana izy ary mahazaka olona roa ambin'ny folo eo ho eo (olona 20 raha mifaneritery).
Tohatra vý avy ao amin'ny Loggia del Lanternino no miakatra ao. Varavarana tery kely, zara raha 80 santimetatra, no idirana ao amin'ilay efitra boribory sahabo roa metatra ny savaivony, ary ny hodidiny dia ahitana tresaka ahafahana mitsirika sy mankafý ny hakanton'ny tazamaso avy eny ambony eny. Efatra ny isan'ireo tresaka ireo ary mifanandrify avy amin'ireo vazan-tany efatra.
Vita amin'ny takela-barahina dimam-polo voahosotra volamena samihafa habe avy io bola io. Efa tamin'ny taona 2005 vao hitan'ireo "sanpietrini" (ireo mpiambina ny bazilika) ny ankosotra volamena, raha sambany tamin'ny tantara "nosasana", nokojakojaina sy nampamirapiratina izy.
Tamin'ny taona 1593 no nametrahana azy teny, araka ny fanirian'i Papa Clément VIII. I Michelangelo no nanao io satro-tafon'ny bazilika io saingy nony nodimandry izy dia i Giacomo della Porta no nanankinana ny famitàna azy, telopolo taona taorian'ny nahafahatesany.
Tamin'ny 1845 aza dia tao no nandraisan' i Papa Grégoire XVI sy nandrosoany fanalana hetaheta ny Tsar rosiana, Nicolas I.
Ny Papa Pie IX no niakatra farany teny tamin'ny 1847, ny alina mialoha ny fankalazana ny Fetin'i Masindahy Piera sy Paoly - olomasina mpiahy ny tanànan'i Roma - efa ho herintaona katroka taorian'ny Fifidianana sy ny Fihasinana azy.
Nanomboka tamin'ny antsasaky ny taona 1950 no tsy azo niakarana sy notsidihana intsony teny satria natahorana hampitsingilahila ny satro-tafo.
[Tantara fampahalalana. ] 06 Aprily, 2021 15:58
Ny làlambý an'ny Firenena Vatikana.
Ny Firenena vatikanina, amin'ny maha-fanjakana mizaka tena azy, dia manana ny làlambý azy manokana ihany koa nanomboka tamin'ny taona 1929. Izy no iray amin'ireo lalambý fohy indrindra maneran-tany - tsy mihoatra ny 1,27 km ny halavany - ary natao hampifandraisana ireo firenena roa, italiana sy vatikanina.
Teo amin'ny fiantsonan'ny lalambý italianina - ny Stazione San Pietro - no miainga sy misaraka izy ireo, ka ny iray miankavia mitondra ireo zotra italianina ary ny iray ankavanana kosa miditra io vavahady be an'ny Firenena vatikana tazana amin'ny sary faharoa io. Io tafo fotsy tazana kely avy atý ivelany io no gara fiantsonan'ny fiaran-dalambý, izay nosokafana tamin'ny taona 1934 ary teo amin'ny fitaterana entana no tena nampiasana az​​y​.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny toetr'andro anefa dia nanjary ny fitaterana an'arabe no nahazo vahana hany ka nalefa nisotro ronono ny fiarandàlambý.
Tamin'ny taon-jobily 2000 dia nesorina ny iray amin'ireo làlambý roa an-drizareo vatikanina ka nanamboarana ity làla​​na​ ​​zary lavarangana fitsangatsangana ity. Mahafinaritra ny taza-maso avy eto, anisan'izany ny tafo boriborin'ny bazilikan'i Masindahy Piera.
[Tantara fampahalalana. ] 05 Aprily, 2021 10:23
Boaty fanaterana taratasy antitra indrindra eran-tany.
Ho eny Castel Gandolfo kely isika, tanàna 25 km avy eto Roma fotsiny. An-tampon-kavoana kely izy, mitatao ny farihin'i Albano, izay farihy vokatry ny volkano taloha. Ny tena mampalaza an'ity tanàna ity, ankoatran'ny hatsarany sy ny tantarany efa fahagola, dia satria any no misy ny fonenan'ireo Papa nifandimby rehefa tonga ny andro mafana. Hatreo amin'ny Fitondran'i Papa Benoà XVI anefa izany satria i Papa Francesco dia nandà tsy hampiasa io Lapa-panjakana io fa nisafidy ny hijanona tontolon'ny taona ao amin'ny Vatican. Lasa tranom-bakoka natao hotsidihan'ny mpizahatany izany ny Lapa ankehitriny.
Fa ny tena hankanesantsika eny Castel Gandolfo ara-tantara androany dia hiresaka momba ny boaty fanaterana taratasy antitra indrindra eran-tany. Roanjato taona izy io izao satria noforonina tamin'ny taona 1820, araka ny sosokevitra natolotr'i Jacorossi, Mpanolotsainan'ireo Priori (fikambanan-drelijiozy no nantsoina hoe priori). Somary sarotra manko ny fifandraisana an-taratasy tamin'izany fotoana izany satria tsy tonga mivantana tao an-tanàna ny taratasy fa tao amin'ny biraon'ny paositra tao Albano Laziale, tanàna mifanila amin'i Castel Gandolfo. Tao kosa dia voatery niandry mpiandraikitra iray hanangona sy hanatitra azy amin'ny toerana tokony alehany ireo taratasy sy entana. Nokaramaina 1/2 baiocco (vola tamin'izany fotoana izany) isaky ny taratasy io mpiandraikitra io.
Mbola nisy olana ihany anefa rehefa tonga any amin'ny tanàna hanaterana azy ireo satria nisy tsy nahay namaky teny sy nanoratra ireo mpiandraikitra ka tsy hainy na ny anarana na ny adiresy tokony hanaterany izany. Teo no teraka ny hevitr'i Jacorossi hoe aleo manokatra boaty iray dia alatsak'izay mpiandraikitra ao fotsiny ireo taratasy dia rizareo ao amin'ny priori no manasivana sy manatitra izany any amin'ny tompon-taratasy avy.
Eo anelanelan'ny Lapan'ny Tanàna sy ny Biraon'ny Paositra no ahitana io boaty roanjato taona niainana io.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 ... 52 53 54 Manaraka»